कुन शक्तिको आडमा धमाधम विस्फोट :: Tarun Khabar: Digital Online Paper from Nepal
कुन शक्तिको आडमा धमाधम विस्फोट
काठमाडौं । प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा मुलुकभर हिंसात्मक गतिविधि देखापरेका छन् । एक साताभित्र दुई दर्जनभन्दा बढी स्थानमा बम आक्रमण हुनु र त्यसको जिम्मेवारी कसैले नलिनुले घटना रहस्यमय बन्दै गएको छ । माओवादीबाट विभाजित नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहले औपचारिक रूपमै निर्वाचन बहिष्कारको घोषणा गरेको छ, तर बम विस्फोट र एम्बुस विस्फोटको घटनाको औपचारिक रूपमा कुनै जिम्मेवारी लिएको छैन । विप्लवको नाममा निर्वाचन भाँड्ने तत्वहरू सक्रिय छन् वा विप्लव समूह नै त्यसको प्रमुख कारणे हो ? रहस्यमै छ । गृहसचिव मोहनकृष्ण सापकोटा माओवादी सरकार भएको बेला गृह मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय र माओवादीकै मन्त्रीले रोजेर उनलाई अर्थ मन्त्रालय लगिएकाले कतिपयले उनीमाथि पनि प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।
कांग्रेस तथा वाम गठबन्धनका उम्मेदवारमाथि आक्रमण गरिएकाले निर्वाचन बिथोल्ने उद्देश्य रहेको देखिन्छ । द्वन्द्वकाल सम्झाउने गरी उम्मेदवार र साथमा हिँडेका कार्यकर्तामाथि आक्रमण हुन थालेकाले मतदातामा सन्त्रास फैलिएको छ । आक्रमणकारीले उम्मेदवारहरूलाई नै लक्षित गरेका छन् ।
रुकुम, दाङ, रोल्पा, भोजपुर, संखुवासभा, सल्यान, रौतहट, नुवाकोट, तनहुँ जस्ता जिल्लामा वाम गठबन्धन र कांग्रेसका उम्मेदवारमाथि आक्रमण भएको छ । सरकारले भयमुक्त वातावरणमा निर्वाचनमा सहभागी हुन आग्रह गरिरहेका बेला एम्बुस र बम प्रहारका घटना बढेकाले प्रतिपक्ष एमालेले शंका गरिरहेको थियो भने गृहका अधिकारीहरूले पनि यो विषयमा औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
मन्त्रालयले एउटा विज्ञप्तिसमेत निकाल्न भ्याएको छैन भने सुरक्षा निकायल कसैलाई समातेको छ छैन ? सार्वजनिक गरेको छैन । पछिल्लो समय निर्वाचन विरोधी समूहले रोल्पामा पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती, विनाविभागीयमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, माओवादी केन्द्रका रोल्पा प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार वर्षमान पुन, प्रदेशसभा उम्मेदवार कुलप्रसाद केसी, भोजपुरमा एमालेका प्रदेशसभा उम्मेदवार शेरधन राई, राजेन्द्र राई, संखुवासभामा राजेन्द्र गौतम गोरखामा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार नारायणकाजी श्रेष्ठ, नुवाकोटमा कांग्रेसका प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार डा.रामशरण महत, म्याग्दीमा कांग्रेसका उम्मेदवार खमबहादुर गर्बुजा र तनहुँमा कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललगायतमाथि आक्रमण गरिसकेको छ । रौतहटमा मन्दिर नजिकै बम विस्फोट हुदा बालबालिका आठजना घाइते भएका छन् । प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा रहेको गृह मन्त्रालय सचिवले सञ्चालन गरिरहेका छन् । सचिवले राजनीतिक हस्तक्षेपका रूपमा अगाडि बढ्न नसक्नुु नै बम प्रहार गर्नेहरू बढी उत्साही भएको आभास हुन्छ ।
Tarun Khabar0response बुधबार,६ मंशिर २०७४ 46 Views